Factorylọ ọrụ China roar Linec atc cnc rawụta na ndị nrụpụta | JCUT
1. stabilitykpụrụ kwụsiri ike: a na-agbakọ mgbidi niile na-emekọ ihe ọnụ, nke a na-eme site n ’ịma jijiji (temping) ịka nká, na-enweghị mbibi mgbe ogologo oge were.
2. Taiwan Syntec nke sistemụ nrụpụta ọrụ dị elu, yana ezigbo njigide, ezigbo mmezi, nwere ike ijikwa mmecha 3D nhazi, ngwa ngwa, nhazi 3D dị mma, ịkwa akwa na ịkpụ.
3. Spindle moto esila Htali HSD elu igwe eji arụ ọrụ igwe arụ ọrụ dị elu, nkenke elu, mkpọtụ dị ala, oke ọsọ, ogologo ndụ, ịrụ ọrụ dị mma iji nye egwuregwu zuru oke na arụmọrụ kachasị elu nke igwe.
4. importtali butere ihe mbụ ejiri rụọ igwe na-egwu mmiri, nwere ike ịbụ otu oge imechibido, ịkpụ, ịkwọ ụgbọ, oghere amị, mkpọchi na usoro ndị ọzọ dị mgbagwoju anya nke imepụta ọnụ ụzọ.
5. Japan Yaskawa servo na-akwọ ike maka ụdị ịkpụ osisi na ịkpụ osisi dị egwu.
6. Nduzi n’uche na-adọkpụpụta ahịrịazu ahịrị nke square ahịrị n’ahịrị abụọ na ahịrị anọ nke bọọlụ slide bọl, nke nwere ike ibute ibu dị ukwuu, na-agba ọsọ nke ọma ma na-enwe nkwụsi ike dị elu.
7. Ngwá ọrụ na-agbanwe agbanwe na-anabata teknụzụ dị elu nke mba dị iche iche, nke nwere ike ịgbanwe amamihe dị mkpa iji nwee amamihe. Ikike nchekwa ngwa nwere ike iru 12-16.
8. Tebụl nwere tebụl oghere ndị dị na mba ụwa, tebụl bakelite njupụta, enweghị mbibi, adsorption dị elu, adsorption siri ike nke ihe dị iche iche, tebụl igwe a nwere nnukwu ikuku akpaka na-ebuli ngwa ọrụ kachasị mfe maka ịmebe oghere oghere mkpọchi ụlọ na usoro nhazi a na-agbanye agbanye.
9.Gudo ndakọrịta software: Dakọtara na MasterCAM, Type3, UG, AutoCAD, ArtCAM, Proe, JDpaint na ndị ọzọ.
1. Furniturelọ ọrụ ngwá ụlọ:
Ngwongwo nke ogwe, ihe eji eme ulo, oche, ube akwa, akwa nke ulo, ihe ndi ihe ochie na ihe ndi ozo n’elu ogwe osisi di n’ime ya ma mekwaa ya igodo.
2. industrylọ ọrụ ịchọ mma:
Ralsdị sọlfọ ọ bụla eji achọ mma, enyo, usoro eji achọ mma, bọọdụ ebili mmiri nwere akụkụ atọ, bọọdụ na-adọrọ adọrọ na nhazi ịkwa mma ndị ọzọ.
3. Ihe eji emecha nke ngwa ngwa ihe eji eme ngwa agha:
Nhazi nke oma nke ihe ndi ozo mechiri emechi dika komputa nke igwe ihe ngbanye ulo na ebe ngbanye igwe eletriki.
4. instrumlọ ọrụ egwu:
Ngbazi isi gita, nhazi gita okokụre na otutu ihe eji achọ mma nke egwuru egwu egwuru egwu n’elu ihe eji ese elu na uzo ato.
5. industrylọ ọrụ ụrọ
Ebu osisi a na-egbute n’oge ya, ahịhịa na-adị ụfụ, ebu nri (dị ka: ọnwa achicha ọnwa) na ebu ndị ọzọ.
6. iclọ ọrụ aka:
Eseresere aka, ịse ihe nkiri, pendant, ihe ịchọ mma ụgbọala na nka na nka na-akpụpụta ihe.
7. models na-eme ka usoro ihe owuwu dị
8. industrylọ ọrụ mgbasa ozi:
Mbelata acrylic na ịkwa akwa, ihe nrịba ama nke acrylic, yana baajị dị iche iche na ihe ịrịba ama nke ọkpụkpụ na mmepụta.
Igwe eji egbutu elu R8 CNC
Akwukwo oru 8 ọnọdụ servo inline akpaaka ngwá ọrụ na-agbanwe mgbanaka ngwaọrụ
Ọgbọ Shanlong 1300W servo moto
Ọkwọ ụgbọ ala Onye na-anya Shanlong servo
Usoro njikwa Shanlong 3042 niile n'otu usoro njikwa
Okpukpo Prọfesọ nnukwu ụlọ ọrụ
Mbelata Japan Shimpo reducer
Nha ịbụ 2800kg
Nke gara aga: Osisi rawụta atc
Osote: Igwe igwe Atc